Fitaovana fitehirizana vy fanamboarana vy,Trolley,Pallet,fitoeran'entana,Roll Container Etc - Foshan Yougu Storage Equipment Co., Ltd.
Foshan Yougu Storage Equipment Co., Ltd dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy ny famokarana karazan-kaontenera fitahirizana lojika vy rehetra,tranom-borona, pallet, Trolley, fametahana talantalana,paleta sns izay mpamatsy vahaolana fitehirizana tanteraka. ny 7000 atrikasa fanaovana metatra toradroa 56 nametraka karazana milina.with 89 ekipa mpiasa matihanina sy injeniera, Ekipa QC sy kojakoja birao hafa .
Nandalo ny ISO9001-2000 izahay tao 2016 ary manohana 500 mpanjifa.malaza tsara amin'ny Honda, Toyota, Volkswage ,Midea, Gree, TCL,Galanz,Coke,JD,DHL and others Yougu provides factory directly competitive price and high quality products for customers ,manokana amin'ny famolavolana sy namboarina mifanaraka amin'ny fangatahanao na ny fampiasanao .
ny 15 ekipa injeniera ary mpiasa manana traikefa an-taonany manankarena arakaraka ny fampiasan'ny mpanjifa. Design Professional sy fanohanana ny sary.
Rafitra fitantanana kalitao hentitra mba hahazoana antoka fa ny vokatra rehetra dia afaka mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa SGS,ISO
Tohano amin'ny mpanjifa malaza maro toa an'i Peugeot, Toyota ,Huawei sns., Ny orinasa hatrany dia mitazona ny vidin'ny fifaninanana.
Namboarina manokana pallet talantalana decking indostrialy paleta rakotra vy paleta fitoeran'entana
Ny fitoeran-tsakafom-baravarana mavesatra dia vita amin'ny pallet
Mpamatsy paompy vy mitahiry adidy mavesatra
Kaontenera mihodina mitazona troli indostrialy amidy
Cutomized famolahana horonan-taratasy fitoeran-trolley fitoeran-javatra
Mpamatsy kaontenera misy horonam-boky vita amin'ny cutomized
Mpamatsy trolley varingarina
trolley ampahany manokana ho an'ny adidy mavesatra Volkswagen
Fantsom-barika vita amin'ny barika divay vy
Pallet vy mihazona vidin'ny orinasa mivantana
fanamboarana kaontenera lehibe fitahirizana
Fampisehoana vy mihidy tsara voaisy tombo-kase
Trolley indostrialy adidy mavesatra
Fiara vita amin'ny kodiarana vy azo esorina ny indostrian'ny fiara
Kabine fitehirizana metaly mitafo mafana